16 Mhando dzeInfographic Layouts Kukukurudzira! | Martech Zone
16 Mhando dzeInfographic Layouts Kukukurudzira!
Muvhuro, Mbudzi 7, 2016 Muvhuro, Mbudzi 7, 2016 Douglas Karr
Kwemakore, isu tave chaiko sosi yevaverengi kuti vawane uye vadzidze kubva kune infographics. Infographics ndeayo, pamwe, chimwe chezvakanakisa zvishandiso zvebhizimusi izvozvi nekuti vane zvakawanda zvakanakira:
Ivo vanogovaniswa zviri nyore, vachiita iyo yakanakisa ye evanhu vezvenhau - kuita kuti zvemukati zviratidzwe uye kuverengerwa munzvimbo dzakakodzera.
Ivo vanoburitswa zviri nyore, vachiita iyo yakanakisa organic search - kugadzira akapfuma, akakodzera backlinks anowedzera yako chinzvimbo.
Ivo nyore kupedzwa, kutora misoro yezvinyorwa zvakaomarara uye kuita kuti zvive nyore kugaya nevaverengi. Kunyange vhidhiyo ingave iri nyore, zvakanyanya kunetsa kuburitsa (izvozvi).
Kune zvimwe zviwanikwa zvinotimisikidza isu kugovana yavo infographics. Mamwe akanakisa chitsama che stats dzakakwenenzverwa mune yakanaka chati kana maviri. Nepo izvo zvehunyanzvi zvingave zviri infographic, Ini handifunge kuti zvakakosha kugovana saka isu hatidi. Zvimwe infographic zviwanikwa zvinowirirana, yakazara infographics iyo inoita basa rinoshamisa pakutaurirana kwavo chinangwa. Brian Downard ndechimwe chezvinhu izvi uye tinoda chaizvo kugovana basa rese raanogadzira. Nekuda kweizvozvo, Brian akasvika uye isu takasarudza kuburitsa infographic kubatsira vashambadzi kuburitsa zvirinani infographics.
Brian akagadzira iyi inoshamisa infographic, 16 Infographic Layout Pfungwa Unogona Kukopa izvo isu takapa mamwe mazano pa. Mhedzisiro mhedzisiro inokatyamadza uye inofanirwa kubatsira sezvo iwe uchienderera mberi neako anotevera infographic chirongwa Iyo infographic inodonhedza yega yega infographic mune yako nyaya - kuvhura nemusoro uye sumo, wozopa hurukuro huru, ichiteverwa nemhedzisiro (iyo inowanzo kuve nekufona-ku-kuita). Iyo infographic inoratidzira akati wandei masitaera ekuona rako data - kusanganisira:
General - sanganisa uye enzanisa marongero uye machati.
Mbichana mbichana - ipa vaverengi vako maitiro-kana runyorwa rwe nhanho dzako.
Dhata-inotyairwa - fungidzira chero data iro rakakosha kuratidza nyaya yako.
Nemakore - simbisa nhevedzano yezviitiko zvichiteerana.
Kuyerera chati - batsira vanhu kuti vawane yavo mhinduro neakateedzana sarudzo uye nzira dzakaperera.
ne - kupa musoro-ku-musoro kuenzanisa pakati pezvinhu zviviri.
nyaya - famba muverengi kuburikidza nenyaya kuti uzviite
Roadmap - enzanisa rwizi rwemashoko muchiteedzana uye usvike kwauri kuenda.
[bhokisi mhando = "kurodha" align = "aligncenter" kirasi = "" width = "90%"]Click pano kutora Brian yemahara-20-poindi infographic yekugadzira PDF swipe faira uye infographic "teardown" vhidhiyo. [/ bhokisi]
Heano anoshamisa infographic:
Tags: Brian Downarddata-inotungamirwa infographicflowchart infographicinfographic datainfographic dhizainiinfographic dhizainiinfographic mhandoinfographic waya maframumugwagwa infographicnhanho-nhanho infographicnyaya infographictimeline infographicmaringe ne infographic
Inbound Brew: Mhanya Yako Inbound Kushambadzira Maitiro Akananga kubva kuWordPress
Zvemagariro Midhiya Zvirongwa zveZororo